Itiyoophiyaa – Local Insight
Aangawoonni Gargaarsa Miidhamtoota Hongeef Ramadame Miliqsuu Yaalan 54 To’ataman Jedha Mootummaan Oromiyaa
May 4, 2022 VOA
Koomishinni Buusa Gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofee hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to’annaa jala oolfamanii qoratamaa jiru, jechuun beeksise. Obbo Garramuu Oliiqaa, Itti Aanan Buusa Gonofaa Oromiyaa haga yoonaa angawootni shakkaman 54 to’annoo jala oolfamanii himanni irratti banamuu VOA’f ibsanii jiru. click here to read...
Ogeeyyiin Faayyin Artii Iddoo Agarsiisaa Dhabuun Akka Ogummicha Harkatti Quucarse Dubbatu
Waldaan Faayyin Artii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka agarsiisa Fakkii ykn Art gallery dhabuun guddina fi gumaacha silaa gama Artiin kennamuu male quucarseera jechuun ibsa. Miseensonni waldichaa sagalee raadiyoo Ameerikaaf yaada kennan tokko tokko namoonni damee Artii kana keessa jiran kaka'umsa dhunfaatin aadaa fi seenaa ummata Oromoo fakkiin Addunyaatti akka beeksisee...
May 3, 2022 VOA
Paartileen mormitootaa lama Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongirasiin Federaalistii Oromoo KFO "Mootummaan ajjeechaafi hidhaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qaba" jechuun tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kunneen mootummaan, waraana eegale dhaabuun qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qaba" jedhan ibsa mata mataatti kennaniiin. Dhimma...
Waa’een Gaazexxessoota ONN Lamaan Hidhaa Keessa Jiranii Akkaan Nu Yaaddeessee Jira: CPJ
Guyyaan walabummaa preesii har'a addunyaa irratti kabajamaa yeroo jiru kanatti waa'ee Gaazeexxessoota Itiyoophiyaa fi Ertraa keessatti hidhamnii jiranii garee mirga Gaazexxessootaaf Falmu Sii Pii Jee (CPJ) keessatti itti gaafatamtuun sagantaa Afrikaa Anjelaa Kiintaal RSA ibsa kennanii jiru. Akka isaan jedhanti Itiyoophiyaan Afrikaa keessatti gaazexxessoota hidhuun sadarkaa sadaffaa irra akka jirtu akkasumas...
Gaazexxeessonii ONN Lama Har’a Mana-murtiitti Dhihaatan. CPJn Akka Himannaan Irraa Ka’u Gaafate
Gaazexxeessonni Oromiyaa Niwuus Neetwoork lama Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu gochaa farra-mootummaan himatamanii har’a Mana-murtii Walii-galaa Oromiyaatti dhihaachuu isaanii fi manni-murtii yaada gama abukaatoo isaanii fi abbaa-alangaa tii dhihaate wal-biratti ilaaluuf beellama ka biraa kennuu isaa Abukaatoon himatamtootaa Obbo Guddannee Fiqaaduu, Sagalee Amerikaatti himaniru. Karaa biraatiin, gaazexxeessota lameen hidhaa jiran, Dassuu Duulaa...
Hundeessitoota ABO Keessaa Took Ka Tahan Dr. Taaddasaa Eebbaa Du’aan Boqotan
Hayyuun, bu’ureessaa fi Hoggana olaanaa ABO kan turan Dr Taaddasaa Eebbaa dhukubsatanii as Yunaayitid Isttetis keessatti eega yaalamaa turanii booda kaleessa du’aan boqochuu isaanii Addi Bilisummaa Oromoo fi Waldaan Hawaasa Oromoo Waashington DC fi naannawa ishee ibsa a baasaniin beeksisanii jiran. Ibsi Adda Bilisummaa Oromoo irraa bahe akka jedhutti, Dr...
Ayyaanna ID Al Faxir, Finfinnee
May 2, 2022 VOA
Har’a magaalaa Fininneetti Ayyaana ID Al Faxir irratti sirni salaataa geggeessamaa ture sabaabaa jeeqama uumameetiin addaan citee jira. Sababaan jeeqama sanaa kan poolisiin otuu hin se’iin na harkaa dhuka’e jedhe, aara gaazii imimmaansisuu tahuu Manni-maree Ol’aanaan Dhimma Islaamummaa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Dhimma kana irratti ka VOAf ibsa kennan Prezidaantiin Mana-maree...
Abunaa Gindabarat keessatti maaltu ta’e?
Godiina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggommaa Kibbii jedhamtu keessatti, akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti Kamiisa Ebla 13 bara 2014 galgala naannaa sa'atii tokko irratti samii irraa haleellaan gaggeeffamuu jiraattonni ibsanii jiru. Mootummaan garuu, guyyaa sanatti haleellaan samii irraa gaggeeffame hin jiru jedhee jira.Dubbii himaan WBO gama isaaniin, haleellaan Dirooniin gaggeeffamu ragaa...
Baatiin Eblaa baatii waa’een dhukkuba Otiizim ilaalchisee baruumsii fi dadamaqiinsi ooguuma adda addaa itti kennamuu ta'uun beekama. Yunaaytid Isteetis kutaaa Merilaand keessa ka jiru Waaltaa Fayyaa Hospitaala Seent Jooseef keessatti dooktoora fayyaa daa’immanii kan ta'an Dr. Birhaanee Oljirraa waliin gaaffii fi deebii gaggeeffame caqasaa. click here to read original article...
Naannoolee Waraansaa fi Walitti-bu’insaatti Talaalii Daa’immanii Kennuun Rakkisaa Tahuu Beeksisee – Ministiriin Fayyaa Itiyoophiyaa
Naannoolee Itiyoophiyaa adda addaa keessatti sababaa waraansaa fi walitti-bu’insootaan daa’imman umuriin isaanii waggoota lamaa gadii, kanneen gara Miliyoona tokkootti lakkaawaman garii hin tallaalamiin hafuu fi kaan talaalii addaan kutuu Ministiriin Fayyaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Kanneen naannoo waraansaa fi walitti-bu’insaa tahan – Affaar, Amaara, Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz keessatti, keessumaa naannoolee hidhattoonni...